Nyika dzakabatana New Hampshire
NH Estate ndiyo nzvimbo inotaridzika inoshamisa yekushandisa zuva
Chitubu MuMakore Mafashoni Photo Paunenge uchityaira makiromita maviri, kukwira kwemugwagwa kusvika nenzira yeChris in the Clouds, iva nechokwadi chekupedza makiromita nemazana uye uchitanga kumhanya kwemazana maviri yadhi kusvika Falls Falls. © 2009 Kim Knox Beckius
Kana ndakakunda lottery uye ndakatenga chero imwe nzvimbo yeNew England, inenge ichishanda muMakore, iyo inoshamisa, 5,500-acre estate yakavakwa muna 1914 muMoultonborough, New Hampshire, nechepamusoro pemabhizimusi Thomas Plant. Haisi kungoti imba yekugadzira zvinhu inonakidza, iyo inzvimbo yakakwirira mumakomo eOssipee inopa maonero anoshamisa ekudengenyeka kwechando, chitsuwa-chakashambidzwa neLake Winnepesaukee. Nguva imwe neimwe yandakashanyira Castle muMakore, ndakatungamirirwa nefuma yePaliti kumapfupa nhau uye inonakidzwa nemamiriro ekugadzirisa aya.
Nenzira yakajeka, apo Castle Springs ikambani yemvura yakasvibisa mvura yakaisa Castle in the Clouds pachibvumirano muna 2001, iLakes Regional Region Conservation Trust yakakunda jackpot: Vapiro vanopfuura 2 000 vakabatsira kuita kuti izvi zvinoshamisa zvive zvichengetedzwe nekusunungurwa kuvanhu vose ( pakati peMay kusvika kwegore raOctober). Ndichakupai mufananidzo wepfuma iyi mumifananidzo iyi, asi hapana chinofananidza nekushanya nhare, kuenda kumahombekombe nekudya paCarriage House Restaurant.
Kana iwe unoshanyira New Hampshire kuMakes Region, usapotsa Doro muMakore: nzvimbo inonakidza uye inoshamisa ine nzvimbo inopedza zuva.
Falls of Song: Chimiro Chakanaka
Falls of Song, mvura inosvika makumbo makumi mashanu emvura, inoita kuti zvive zvakanaka pakupedzisira kwekukwira kwenguva pfupi. Ndiyo yekutanga yezvinhu zvinoshamisa zvinoshamisa zvauchaona pakushanyira Castle muMakore.
Inofara uye Inonzwika
Sezvo Shannon Brook inowira pamusoro pegomba rakaputika, inogadzira ichi chikafu chinotyisa chinenge chichiratidza kutadza-kunzwa zvinyoro uye nekuramba uchiita-sezvazviri kuona, ichipenya muzuva rezhizha.
Vanoshanyira Kunzvimbo Mumakomo Makasheni pedyo neChip Gift Shop uye famba kuenda kune imwe yaimbova Carriage House, iko zvino iri kumba kweCarriage House Restaurant, kwavanoenda nebhadhiri kuenda kumakomo eimba yaT Thomas Plant.
Zvakatora 1 000 vashandi vane ruzivo vanopfuura makumi mana gore rekuvaka imba iyi yemabwe yemugove wekutanga Thomas Plant. Nhare iyi yaiva chipo chemuchato kuna Olivia Dewey. Imba yakaroora yakasangana nemwenga wake wechidiki, makore makumi maviri nemasere, paaifamba muFrance muna 1912.
Mune chizvarwa chemaMaine, Thomas Plant akasiya musha pa14 achitsvaga fuma yake. Aiva nekambani yekashanguro yekutanga yezera remakore makumi maviri nemaviri. Paakazotanga kuvaka kweChina muMakore, fuma yake yakafungidzirwa pa $ 21 Mamirioni: iyo yakaenzana ne $ 1 billion nhasi.
Yakagadzirwa neBoston mapurani J. Williams Beal & Vanakomana, Castle muMakore uye imba yaro yemotokari yakavakwa negranite yakabviswa kubva padzimba uye ruoko rakatemwa nemasoni eItaly pachiyero chematombo anenge matatu zuva rega rega.
Apo Thomas Plant akasimuka akaenda kuNew Hampshire pazera remakore 51, Jamaica yake Plain, Massachusetts, chigadzirwa chaive chigadzirwa chepasi chikuru chevakadzi shangu nevashandi 5 200 vanobudisa mamiriyoni matatu maviri pairi pagore. Uye, yakanga iri imwe chete yezvigadzirwa zveshangu zvishanu zvaaiva nazvo.
Tomasi uye Muti weOrive vakatumidza nzvimbo yavo yemakomo pamusoro pekudzivirira Lucknow. Nhetembo yeOrive, Lucknow , inotaura kuti nemafaro akawanda akawanikwa, pakupera kwezuva, vashanyi vose vanobvumirana zvechokwadi: "Ndiri muLuck Iye zvino pakupedzisira."
Nhanho Mukati kweChina
Rwendo rwekutungamirirwa rweChishanu muMakore rinowanikwa pakati peMay kusvika kwegore raOctober. Chimwe chinhu chinoshamisa chekuvhima kwevana chinokurudzira vechidiki vashanyi kuti vatsvake zvinhu zvakananga uye zvinyorwa sezvavanotsvaga iyi inoshamisa yeNew Hampshire pokugara.
Nhumbi dzezvombo muhofisi yaPaul Plant haisi kungoita apropos castle. Iyo shoco tycoon inofungidzirwa kuti yakapfekedza sutu kune imwe yepfeko. Tarisa pazviri, uye iwe uchaona kuti Plant yakanga isiri munhu akareba kwazvo.
Chivande Chekuviga Nzvimbo
Iwe wakanga wakarurama. Thomas Plant yakanga yakareba mamita mashanu chete. Mudzimai wake wechipiri, Olive, akanga akareba mamita matanhatu. Mr. Plant aigona kudonha nyore nyore mumusuo mutsva kune imwe nzvimbo yakavanzika kubva muraibhurari, achivimba kuti Mai vake vaisakwanisa kupinda munzvimbo yake yega.
Chimbo Chine Simba
Nhengo yeAeolian pipe muholo huru paChris in the Clouds inogona kutambidzwa nemaoko kana kuti inotamba nemapuraneti. Vafambisi vepaLake Winnipesaukee vari pasi vanogona kunzwa marwadzo ayo anotinhira pose paiitwa.
Imba Yokudya Inyanzvi
Imwe yeictagonal yokudyira paChris in the Clouds ine denga rakaoma. Imba yemauto yepakutanga inosanganisira zvidimbu zvakawanda zvakagadzirwa zveMiti ne Irving & Casson-AH Davenport, Boston's leading furniture makers.
Yakavakirwa pamutengo we $ 7 mamiriyoni muna 1913-14, Lucknow (rakazotumidzwazve kuti Castle in the Clouds) yakataura zvisingawaniki zvezvinhu zvinosanganisira nzvimbo yakakura yokudziya, ye self-cleaning fur and this brine refrigerator.
Bhatireji firiji mumutambo wemuchina wekombe yainge yakasvibiswa nehutachiona hwemvura yemunyu muchitsime. Iyo yakaiswa kuti inoratidzika seyokuti Zvirimwa zvingave panguva ipi zvayo kudzokera kuimba yeimba yavakada.
Ichi chifananidzo chiri cheimba yekutanga yeimba yevashanyi. "Vashanyi vanopinda muimba ino, Mirai mushamise uye mushamiswe," akanyora Olive Plant munhetembo yake. "Nemafungiro akadaro akadai, Ne'er asati asangana nemeso avo."
Nzvimbo dzekugezera muimba yaStart Plant, dzakadai saiyo muimba yevashanyi, dzaive dzakagadzirirwa neAllle-shaped-floods-chigadziri chemapuranga chakange chakakomba nokuda kwekutsva kwezana remakore rechi20.
Chitubu Mumakore 'heyday aiva nguva pfupi. Thomas Plant akazvitenga zvisungo zveRussia ... nguva isati ya1917 Russian Revolution. Akaisa mari mumashuga eCuban mune ramangwana ... ipapo dutu rakaparadza mbeu. Akarasikirwa nezvimwe muna 1929 kuparara kwemusika.
Castle in the Clouds 'tenzi yekamuri yekamuri yakatarisa ine maonero anoyevedza eLake Winnipesaukee. Zvinosuruvarisa, apo bhokisi rekamuri yekamuri rakaparadzwa muchamupupuri, mbeu dzaisagona kugadzirisa. Nhaka yavo yakange isingarambi ishandurwa.
Kuguma Kusuruvara Kukuru Kwekutonga
Pakazosvika 1940, Lucknow akanga ari mukufananidzira. Munguva yezhizha ra1941, mazuva matatu mushure mekunge aziviswa nzvimbo yake yaizotengeswa, Thomas Plant akazofa ava nemakore 82. Akanga ari murombo, shamwari dzaiputirwa muguva rake.
Kana waimboenda kuChitsuwa mumakore, uchirara pamasikati, kudya kwemanheru kana kudya uye kunwa paCarriage House Restaurant muCarriage House. Bistro-style menyu inowanikwa muimba yekunze kana kunze. Zvigaro zvekuchiva pa patio zvinotarisa Lake Winnipesaukee.
A $ 7 Million View
Iko maonero Thomas Plant akabhadhara mamiriyoni kuti ave yako ndeyako pamutengo wekugamuchira ($ 17 muna 2017) kuChris in the Clouds. Sezvaunotarira kunze kweLake Winnipesaukee kubva kuresitorendi, tenda kukoshesa kwekuti izvi zvinoshamisa hazvigoni kutorwa zvakare.
Rwendo Rwezve Rimwezve New England Castle: Gillette Castle
Sarudza Hampton Beach, NH, yeClass Family Beach Vacation
Nzvimbo dzePaki uye mapoka ezvekukuvara muNew Hampshire
Nzira Yokuita Ida Kentucky Derby Hat
Kutungamira kuIndia Mahaparinirvan Express Buddhist Circuit Train
Nzira Yokupemberera Nayo Disneyland Birthday
Kuderera Kwechikepe neHotboarding Resorts Pedyo neMinneapolis naSt. Paul
Halloween Mabasa muDallas-Fort Worth
Cranberry Recipes kubva kuNew England Cranberry Country
Mibvunzo Ichishanu WAUNOFANIRA Bvunza Musati Tengenga Kutenga Inishuwarenzi
8 Unofanira-Sip Cafes Kuedza muMelbourne
Zvinotora Nguva Yakadini Kuti Ugamuchire Pasipoti Yako?